‘दुई अर्ब बजेट पार्नु मेरो पहिलो उपलब्धि हो’ : रेणु दाहाल | चितवन पोष्ट
गृह » ‘दुई अर्ब बजेट पार्नु मेरो पहिलो उपलब्धि हो’ : रेणु दाहाल
भरतपुर महानगरको मेयरमा निर्वाचित रेणु दाहालले आफ्नो कार्यकालको ३५ दिन पूरा गरेकी छन् । उनी महानगरपालिकाहरुमा देशकै पहिलो महिला मेयर पनि हुन् । साविक शिवनगर गाविस, हाल भरतपुर महानगर वडा नम्बर १४ शिवनगरमा २०३३ असारमा जन्मिएकी रेणुले भरतपुरको महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि यो ३५ दिन कसरी बिताइन् ? यो अवधिमा उनले केके कामहरु गरिन् ? अबको समय महानगरका कस्ता गतिविधिहरुमा उनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ? मेयर रेणुको पहलमा साँच्चै भरतपुर महानगरले विकासमा कोल्टे फेर्ला त ? यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर चितवन पोष्ट दैनिकले मेयर रेणुसँग गरेको साक्षात्कार :
१) भरतपुर महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएर कार्यभार लिनुभएको एक महिना नाघेको छ, यो एक महिनाको समयमा केके काम गर्नुभयो ?
– एक महिनाको अवधिमा केही राम्रा कामहरु भएका छन् । सोचेजस्तो दूरगामी मह¤वका काम त भएका छैनन्, तर पनि राम्रा कामको सुरूवात भएका छन् । मैले पदभार लिएकै दिन पहिलो काम भरतपुर अस्पतालमा महिला र ६० वर्ष कटेका वृद्धहरुलाई ओपिडी टिकट निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेँ । यो कामको प्रभावकारिता देखिएको छ, जसको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ ।
त्यस्तै, महानगरलाई प्रविधियुक्त बनाउन नारायणगढको पोखरा बसपार्क र भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा फ्रि वाईफाई दिइएको छ । एक÷दुई दिनमा महानगरवासीले त्यहाँ फ्रि वाईफाई चलाउन पाउने छन् । अहिले त्यो कामको सिलसिला अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, यही एक महिनाको अवधिमा हामीले अव्यवस्थित नारायणगढ र भरतपुरको पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न ठाउँमा पार्किङ स्थलहरु बनाएका छौँ, जहाँ सवारीधनीहरुले सशुल्क पार्किङ गर्नुपर्छ । यो नियम असोज १ गतेबाट लाग्छ । पसल सञ्चालकहरुले सडकको पेटीहरुमा बेच्ने सामन राख्न पाउने छैनन् । यसलाई पनि असोज १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । हर्न निषेध गर्ने, करहरुको दायरा बढाउनेलगायतका कामहरु पनि भएका छन् । हामीले महानगरको समग्र विकासका लागि यसबीचमा विज्ञहरुसँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmयाहरु गरिरहेका छौँ ।
२) दीर्घकालीन योजनाका काम त कुनै पनि भएनन् नि, कुनै कामको घोषणा गर्ने योजना छैन ?
– हो, यो एक महिनाको अवधिमा कुनै दीर्घकालीन योजनाका काम भएका छैनन् । थुप्रै दीर्घकालीन योजनाका कामहरु गर्न बाँकी छ । केही दीर्घकालीन योजनाको घोषणा छिटै हुने नगर सभाबाट हुन्छ । सायद, दसैँपछि नगर सभा हुने तयारी भइरहेको छ । महानगरवासीको जनअपेक्षा ठूलो छ, केही जनअपेक्षाको हल नगरसभाले गर्ने भएको छ । सभाहलको कुरा छ, रिङरोडको कुरा छ, ल्यान्डफिल साइटको कुरा पनि छ । यस विषयमा
नगर सभाबाट नै केही हुनेछ । महानगरको गुरूयोजना बनेपछि दीर्घकालीन कामको घोषणा हुनेछ । हामी सबैभन्दा पहिला महानगरको बृहद् गुरूयोजना निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, केही दिन धैर्यधारण गरी बस्न म महानगरवासीहरुमा अनुरोध गर्दछु ।
३) विकासमा भन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको समय बढी स्वागत, सम्मानमै बितेको छ भन्ने गुनासो छ नि ?
– चुनावको बेला हामीलाई सबैले सहयोग गरेका हुन् । आयोजकहरुले चुनावको बेला सहयोग गरियो, निर्वाचित भएपछि स्वागत पनि गर्नप¥यो भनेर बोलाउन आउँछन् । कति आयोजकहरुले धर्ना नै कस्छन् । समय छैन भन्दा पनि आयोजकहरुले आधा, एक घन्टा भनेर बोलाउँछन् । हामीले हाम्रा समस्या सुनाउन बोलाएका हौँ भन्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी नजाने ? आयोजकहरुले बोलाउँदा कार्यक्रममा नजाँदा उनीहरुले अपमान महसुस गर्ने डर पनि छ । भोलिका दिनमा हामीलाई सबैको सहयोग चाहिएको छ । त्यसैले, कति ठाउँमा नगई नहुने अवस्था आउँछ । स्वागत, सम्मानको काम पनि फेरि सधैँ त हुँदैन । यो अझै केही समय जाला पनि । तर स्वागत, सम्मानमा जाँदा महानगरका अरु विकासका काम पाखा परेका भने छैनन् । सबै काम भइरहेका छन् । तपाईंजस्ता पत्रकारहरुले स्वागत कार्यक्रममा जाने लहर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेपछि हामीले यसलाई कटौती गरेका छौँ । तर, जानैपर्ने काम हुँदा त जान पनि पर्छ । महानगरवासीको गुनासो सुन्ने अवसर पनि हामीलाई यस्ता कार्यक्रमले दिएको छ । कार्यक्रम स्वागत, सम्मानकै हुँदा पनि ती कार्यक्रममा नगरवासीहरुले आफ्ना टोलछिमेकका समस्याहरु र विकास निर्माणका कुराहरु नै राख्नुभएको छ । यी सुझावहरु महानगरको समग्र विकासको सारथि हुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।
४) भरतपुरलाई स्मार्ट सिटीदेखि मेघा सिटीसम्म बनाउने लक्ष्य छ भनिन्छ, यो सपना हो कि सम्भावना पनि छ ?
– असम्भव भन्ने कुरा त के नै छ र ? भरतपुर सम्भावना नै सम्भावनाको सहर हो । कृषि, पर्यटन, उद्योग, मेडिकल सिटी, शैक्षिक हवसहितको स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी, मल्टी सिटीजस्ता सिटीहरु भरतपुरलाई बनाउन सकिन्छ । केवल यसमा इच्छाशक्ति र सहयोगको खाँचो छ । हामीले चुनावको बेला पनि यस्ता सिटीहरु बनाउने योजना सारेका थियौँ । भरतपुरलाई पाँचवटा सिटी बनाउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले २ अर्बको बजेट हामीलाई दिएको छ । यो बजेट पार्नु नै मेरो पहिलो उपलब्धि हो । चरणबद्ध रुपमा ४ वर्षभित्रमा यो बजेट भरतपुर महानगरलाई प्राप्त हुन्छ । यो वर्ष ३० करोड बजेट आएको छ । अहिले सपनाजस्ता लाग्ने दूरगामी योजनाहरुलाई साकार पार्न म लाग्ने छु । यसलाई सम्भावनामा परिणत गर्न मेरो भूमिका सदैव रहने छ ।
५) तपाईं गठबन्धन (कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) बाट विजयी हुनुभएको हो, तपाइंले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रलाई मात्र काखा लिएर हिँड्नु पाउनुहुँदैन, कांग्रेसका कुराहरु पनि तपाईंले सुन्नुपर्छ । यो तालमेलले काम गर्न कति सजिलो अथवा गाह्रो भएको छ ?
– हो, म गठबन्धनबाटै विजयी भएर आएको हुँ । एउटा पार्टीबाट उठेर विजयी भए पनि म अब सम्पूर्ण महानगरको साझा मेयर हुँ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा म गर्नेछैन । मैले मेरो पार्टीको मात्र कुरा सुन्ने, अथवा कांग्रेसको मात्र कुरा सुन्ने अथवा एमालेलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्नेजस्ता काम मबाट हुँदैनन् । यीमात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरु पनि छन्, उनीहरु सबैलाई साझा आँखाले हेर्नेछु । विकासका हरेक कुरामा मलाई साथ र सहयोग हुने आशा पनि गरेको छु ।
६) महानगरमा बहुमत गठबन्धनकै छ, कार्यपालिका गठनमा पनि गठबन्धन भएको छ । एमालेलाई माइनस गरी अगाडि बढ्ने हर्कत त गर्नुहुँदैन ?
– मैले भनिसकें, म साझा मेयर हुँ । कसैलाई पनि माइनस गरेर अगाडि बढ्दिनँ । सबैलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्छु । तर, मेरो असल कामलाई कसैले पनि तगारो नहालोस् भन्ने मैले चाहेको छु । असल काम गर्दा विरोध नहोस् भन्ने मेरा चाहना हो । एमाले, कांग्रेस अथवा अन्य दल कसैलाई पनि माइनस गरेर अघि बढ्दिनँ । सबैसँग हातेमालो गरी समन्वयात्मक भूमिका निभाउँदै अघि बढ्नेछु ।
७) काठमाडौँजस्तो भद्रगोल र अव्यवस्थित महानगर हामीलाई चाहिएको छैन । सभ्य, सफा र समृद्ध महानगर हामीलाई चाहिएको छ, केके कुरामा कस्ता नीतिहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– हो, हामी पनि हाम्रो महानगर सफा, समृद्ध र नमुना महानगर बनाउन खोज्दैछौँ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ । कुरुप र अव्यवस्थित महानगर हुनबाट रोक्न अहिल्यैदेखि हामी चनाखो भएका छौँ । प्रत्येक वडाहरुमा एउटा तरकारी बजार बनाउने योजना छ । नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको सब्जी मन्डीलाई अन्यन्त्र सार्ने योजना हामीले बनाएका छौँ । त्यहाँ महानगरको कम्प्लेक्स बनाउने योजना छ । सडक फराकिलो र पक्की बनाउने, पार्कहरु निर्माण गर्ने, ढलहरुलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । पक्कै पनि हामी अहिल्यै सचेत भएर भरतपुर महानगरलाई काठमाडौँजस्तो बनाउने छैनौँ । स्थानीय सरकार भनिएको छ, स्थानीय नीतिहरु बनाउँदा सबैको छलफलबाट बनाइने छ । यसैका लागि पहिला महानगरको गुरूयोजना बनाउने भनेका हौँ । योजनाबद्ध दिगो विकासले नमुना महानगर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
८) अन्त्यमा, चुनावको बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरु र घोषणाहरु कति समयसम्म पूरा होलान् ?
– हेर्नुहोस्, हचुवाका भरमा चुनाव जित्नका लागि हावादारी योजना बनाएर म निर्वाचनमा होमिएको होइन । जनजीविकाको पक्षपोषण गर्दै समृद्ध महानगरको परिकल्पना गरेर दृढ इच्छाशक्तिसहित लागिपरेको छु । जनताको अपेक्षा धेरै छ, चुनावको बेला धेरै प्रतिबद्धताहरु र घोषणाहरु गरिएका छन् । त्यो मेरो कार्यकालभर गर्न सक्ने खालका छन् । ती प्रतिबद्धताहरु मैले ५ वर्षभित्रमा पूरा गर्छु । अहिल्यै नै एक वर्ष यो काम गर्छु, अर्को वर्षमा यो गर्छु भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, मेरा योजनाहरु मैले मेरो कार्यकालमा सक्छु । महानगरवासीले अनुभव गर्ने गरी दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाहरु तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने छु । यसमा सबै राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाहरु, तपाईं पत्रकार साथीहरु र सरोकारवाला पक्षहरु सबैको रचनात्मक सहयोग र सुझावको आवश्यक छ । सबै महानगरवासीको सहयोग चाहिन्छ । सहयोग नपाए एक जना मेयरले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ । यसबाट मात्र एउटा समृद्ध महानगरको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।